Sonos Roam, kuongororwa nemutengo uye maficha | Gadget nhau
Sonos Roam, diki asi inotyisa [KUDZIDZA]
Kune dzimwe nzira dzakawedzera uye dzinonzwika dzinouya, kunyanya kana tichitaura nezvekufamba, uye hazvimborwadzise kudzika mudziva kana kuenda kunogocha pamwe needu mutauri akangwara uye toshandisa mukana iwoyo kusimbisa masikati edu zvakanyanya zvinogoneka. Sonos akacherekedza kubudirira kweMove uye anga achida kuzviita zvidiki uye zvinokwezva.
Tsvagurudza nesu zvese zviri mariri uye nei Sonos izvozvi ichiti chigaro chevatakurwi vanotakurika
Sezvo pane dzimwe nguva zhinji, isu tafunga kuperekedza ongororo iyi nevhidhiyo pane yedu chiteshi YouTube mauri iwe uchakwanisa kuona iyo yakazara unboxing, setup matanho uye zvimwe zvinotonhorera maficha senge bvunzo dzeinzwi. Tinokurudzira kuti iwe upfuure nepanzvimbo yedu uye utore mukana wekujoinha nharaunda yeActualidad Gadget, ipapo chete ndipo patinogona kuramba tichikuunzira zvirinani zvemukati uye nekukubatsira iwe mumasarudzo ako. Rangarira kuti bhokisi remashoko rinogona kubata mibvunzo yako yese, usazeze kuishandisa. Wakazvida here? Unogona kutenga Sonos Roam pa IZVI ZVINONZI.
1 Zvishandiso uye dhizaini: Yakagadzirwa muSonos
3 Otomatiki TruePlay uye Sonos Swap
4 Kuzvimiririra uye odhiyo mhando
Zvishandiso uye dhizaini: Yakagadzirwa muSonos
Iyo North America femu inokwanisa kuvaka michina ine zvairi, uye yanga ichiita izvi kwemakore mazhinji. Mune ino kesi, iyo Sonos Roam nenzira isingadzivisike inotiyeuchidza nezve chimwe chigadzirwa chigadzirwa, Sonos Arc. izvo zvatichangobva kuongorora. Uye ndezvekuti kuva akatendeseka, yakafanana nekopi kadiki keiyi dhizaini inokwezva uye kuti kurumbidza kwakawanda kwakashandira iyo yakasimba. Iyo ine yakaenzana compact size uye iyo yechiratidzo pachayo zvinhu, ine yakasarudzika muviri iyo inobvisa zvachose nylon kuti ipe yakakura kuramba. Takasarudza zvakare maviri mavara, machena uye matema ane matte apedza.
Vipimo: 168 × 62 × 60 mm
Weight: 460 gramu
Zviripachena hachisi chinhu chakareruka, asi ndechekuti hapana mutauri anozviremekedza achange aine huremu hwakareruka, mune izvi zvigadzirwa zvine mutsindo kupepuka kwakanyanya kunowanzoreva kusanzwisisika kwemhando yepamusoro. Izvo hazviitike pamwe neSonos Roam, iyo zvakare inosanganisira IP67 certification, haina mvura, Guruva rinodzivirira uye rinogona kunyudzwa mumvura kusvika pakadzika mita imwe kusvika pamaminitsi makumi matatu zvichienderana nechiratidzo. Isu hatina kutarisa aya mazwi nekuda kwezvikonzero zviri pachena, asi zvirinani iyo Sonos Move yakazvisimbisa kwatiri.
Sezvazvinoitika pane dzimwe nguva, Sonos anotangisa chigadzirwa chakanyatsogadzirirwa kushandiswa nacho Wifi, saka inosanganisira kiredhiti kadhi inoenderana nechero router 802.11 b / g / n / ac 2,4 kana 5 GHz nekwanisi yekutamba zvisina waya. Izvi zvinonakidza kuenderana ne5 GHz network, tinoziva kuti havasi vazhinji vatauri vanowirirana, mune iyi Sonos Roam haina kushaikwa. Nekudaro, isu hatifanire kukanganwa kuti Sonos ikombuta diki iri muchimiro chemutauri, inoviga mumoyo wayo a 1,4 GHz quad-core CPU ine A-53 mapurani iyo inoshandisa ndangariro 1GB SDRAM uye 4GB NV.
Google Home kuenderana
Amazon Alexa kuenderana
Apple HomeKit kuenderana
Zvese izvi zvinoita iyo Sonos inofamba chigadzirwa chakazvimiririra icho chakateerana MAKARALI USB 5.0 yenguva idzo dzinotiendesa kure kure nekumba, uye nezve izvo zvakagadzirwa naSonos Roam iyi. Kunze kweizvi, isu tichavawo nazvo Apple AirPlay 2 izvo zvinoita kuti ienderane zvizere nemidziyo yekambani yeCupertino uye ne Apple HomeKit kana zvasvika mukugadzira zviitiko zve multiroom nenzira iri nyore. Zvese izvi zvinotibvumidza kunakirwa Spotify Unganidzo, Apple Music, Deezer, uye nezvimwe zvakawanda.
Otomatiki TruePlay uye Sonos Swap
Iko kuwedzerwa kukosha kweSonos Roam hakusi chete kwataurwa pamusoro apa, kunyangwe zvingaite senge zvinopesana nekuti ndiyo yakachipa pane Sonos pamusika, isu tinowana maviri software uye zvigadzirwa zvehardware izvo zvenguva iyo Sonos isina kuisanganisira mune avo vese vakangwara mutauri . Isu tinotanga neSonos Swap: Kana uchinge wakabatana neWi-Fi uye iyo yekutamba / yekumbomira bhatani paRoam yakadzvanywa uye kubatwa, mutauri acharatidza vamwe Sonos vatauri pane yako network kuti vabudise ultrasonic frequency kurira. Mimhanzi ichaendeswa kubva kuSonos Roam kuenda kune mutauri wepedyo mumasekondi.
Isu tave kutaura nezve otomatiki TruePlayVazhinji venyu munoziva kuti TruePlay ndiyo nharaunda yekuongorora system yeSonos zvishandiso izvo zvinotibvumidza isu kuti titore yakanyanya kurira kune yega yega nguva. Iye zvino tava kukwanisa kuita otomatiki basa rinotivimbisa kuti Sonos TruePlay iri kugara ichishanda kuti itipe iyo yakanakisa odhiyo kunyangwe isu patakabatanidzwa kuburikidza neBluetooth, chimwe chinhu chakasarudzika panguva yeSonos Roam.
Kuzvimiririra uye odhiyo mhando
Tinoenda zvino kumadhiramu, pasina kutaurwa mu mAh isu tine 15W USB-C chiteshi (adapta isina kubatanidzwa) uye waya yekuchaja rutsigiro Qi, charger yatinofanira kutenga zvakasiyana nema49 euros. Sonos anotivimbisa maawa gumi ekutamba, ayo mumayedzo edu akasvitswa chero sekureba sekunge isu mubatsiri wezwi akabviswa uye vhoriyamu inodarika 10%. Kuibhadharisa isu tinotora rinopfuura awa kuburikidza neiyo USB-C chiteshi, hatina kukwanisa kuyedza Qi charger.
Dual Kirasi H Dhijitari Amplifier
Nezve iro ruzha mhando, Kana tikazvienzanisa nezvimwe zvigadzirwa mune yayo huwandu senge iyo Yekupedzisira Nzeve Boom 3 kana mutauri weJBL tinowana chigadzirwa chiri pachena chakakwirira. Hongu OK tine ruzha rwuri pamusoro pe 85%, Zvinotaridzika kuva zvisingadzivisike nekuda kwehukuru hwechigadzirwa, nenzira imwechete iyo hunhu hwayo hwakanyanya kwazvo, mabhuti ari kunyanya kusimbiswa. Ndakashamiswa nesimba rakakura rechishandiso, huwandu hwayo maikorofoni yakabatanidzwa. Zvese izvi zvinoita kuti ive yakasimba kwazvo uye yemhando yepamusoro diki inotakurika mutauri pamusika we € 179., uye zvinoshamisa kuti haikurudzire mutengo wakanyanyisa uchienzaniswa nemakwikwi.
Yakatumirwa pa: 6 April 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 3 April 2021
Unheard yekubatanidza mune compact mutauri
Sonos kurira kwemhando uye simba
Spotify Unganidzo uye mamwe ese mabhenefiti eSonos S2
Alexa, Google Imba, uye AirPlay 2 kuenderana
Kurema kwacho kwakanyanya
Hazvisanganise magetsi adapter
Qi charger haina kubatanidzwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Sonos Roam, diki asi inotyisa [KUDZIDZA]